तपाईको एक्वैरियमको लागि E एसेन्सियल सहयोगीहरू माछाको
जब तपाईं एक्वैरियमको संसारमा शुरू गर्नुहुन्छ तपाईंलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि तपाईंले आफ्नो माछाको लागि केहि सामानहरू किन्नुपर्नेछ। यो केवल माछा, एक्वेरियम र पानी किन्नको लागि मात्र होईन, तर तपाईंलाई एक श्रृंखलाको आवश्यक पर्दछ एक्स्ट्रास ताकि सबै सही तरीकाले काम गर्दछ। यस पोष्टमा हामी तपाइँहरू उनीहरूलाई के देखाउँदैछौं तपाईको एक्वेरियमको लागि उत्तम सामानहरू ताकि तपाइँले के लिनुपर्नेछ राम्रोसँग जान्नुहोस्।
यदि तपाईं यी प्रत्येक add-ons को विशेषता र कार्यहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, यो तपाईंको पोष्ट 🙂 हो
सल्लाहहरू खरीद गर्नु अघि सुझावहरू
माछा वा पशुको पसलमा किन्न हतार गर्नु अघि, के आवश्यक छ भनेर राम्ररी जान्नु आवश्यक छ। प्रत्येक एक्वैरियमको आवश्यकताहरू फरक-फरक हुन्छन्, यद्यपि ती सबैमा केही समानताहरू छन्। यस अनुसार तपाईंले परिचय दिन लाग्नु भएको माछाको प्रकारहरू, एक्वेरियमको आकार, जलीय बोट, आदि तिनीहरूलाई केहि सामान वा अरू आवश्यक पर्दछ।
थाहा पाउनुपर्ने पहिलो चीज भनेको हामी एक्वैरियममा पाउनु पर्ने माछाको आवश्यकता हो। मिठो पानीको माछाको तुलनामा ताजा पानीको माछा खानु हुँदैन। न त चिसो पानीका भन्दा अरु उष्णकटिबंधीय माछा खानु नै हो। कसैलाई वास्तविक बोटबिरुवाहरू चाहिन्छ र अरूले केही सजावटी प्लास्टिक राम्रोसँग बाँच्न सक्दछन्।
यस संसारमा प्रवेश गर्दा धेरै व्यक्तिले के गर्छन् अनगिनत सामानहरू किन्नु हो। यो सबै सौंदर्यशास्त्र वृद्धि गर्न। जे होस्, ती मध्ये धेरै अनावश्यक छन् र अन्ततः माछाको पौडीने स्थान, हाम्रो समय र पक्कै, पैसा कम हुनेछ।
उत्तम सामानहरू जब यो सामानहरू आउँदछन् भन्ने छ एक्वेरियम जहिले पनि सफा र सफा हुन्छ। अन्यथा, हामीसँग यो भए पनि, यस्तो लाग्दछ कि यसले नराम्रा हेरचाह गरेको छ।
एक्वैरियमका लागि सबै भन्दा राम्रो सामानहरू
अर्को हामी एक्वैरियमलाई वास्तवमै चाहिने सामानहरूको सूची लेख्न गइरहेको छ र त्यसले तपाईंलाई माछाको हेरचाह गर्न मद्दत गर्दछ। बाँकी सामानहरू केवल सजावटी हुन् र केहि उपयोगी प्रदान गर्दैन।
NICREW फिल्टर को लागी ...
ICA OP600 आन्तरिक फिल्टर ...
कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।तिनीहरू एक्वेरियममा आवश्यक छन्। कम्तिमा एउटा हुनु आवश्यक छ। यस तरिकाले हामी पक्का गर्छौं कि माछाको बाँच्नका लागि आवश्यक सर्तहरू कायम राखिएको छ। फिल्टरहरू तिनीहरू ती अवशेषहरूको पानी सफा गर्न जिम्मेवार छन् र त्यो तैरिरहन्छ।
यो आवश्यक छ कि माछाको ट्या tank्कीमा पानी माछालाई स्वस्थ राख्नको लागि सफा राख्नु पर्छ। तिनीहरू पनि जैविक फिल्टरेशन पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलव फोहोर ब्याक्टेरियामा परिणत भएको छ जुन माछालाई फाइदाजनक छ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका फिल्टरहरू छन्, तर सामान्यतया योसँग एक जैविक, मेकानिकल र रासायनिक निस्पंदन। यस प्रकारको फिल्टरको साथ यो एक्वेरियमलाई राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि पर्याप्त छ।
अर्को फरक विकल्प फिल्टरहरू छुट्टाछुट्टै किन्नु हो। यो विकल्प अधिक महँगो छ र अधिक रखरखाव आवश्यक छ। यद्यपि यसले हामीलाई हामीलाई आवश्यक लाग्ने कुरा छनौट गर्न अझ स्वतन्त्रता दिन्छ र यसले काम गर्न रोक्नु परेमा हामी एकल इकाई बदल्न सक्छौं।
BPS एक्वैरियम हिटर...
BPS सबमर्सिबल हिटर...
धेरै माछाहरूलाई उनीहरूको उष्णकटिबंधीय आवासको प्राकृतिक अवस्था अनुकरण गर्न तातो पानीको आवश्यकता पर्दछ। यिनीहरू अत्यावश्यक सामानहरू हुन् यदि हामी माछाहरूलाई स्वस्थ राख्न चाहान्छौं। त्यहाँ धेरै प्रकारका हीटरहरू छन्। सब भन्दा सिफारिस ती हुन् कि स्वचालित तापमान नियमन। यस तरिकाले तपाईं आदर्श तापक्रम छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन माछाको हुनु पर्छ र यसलाई कायम राख्नु पर्दछ।
जब पक्षलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।यो हेर्नु हो कि यसले हाम्रो एक्वेरियममा भएको पानीको मात्रा प्रयोग गर्न सक्छ। छिटो नपर्न र यो सबै पानी तातो छैन कि ठूलो छ कि एक किन्नु यो सधैं एक राम्रो विकल्प हो।
BPS सेतो / निलो एलईडी बत्ती ...
प्रकाश सूर्यको प्रकाश अनुकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ र अधिक सफल र सुन्दर सौन्दर्य उपस्थिति दिन्छ। त्यहाँ बत्तीहरू विभिन्न प्रकारका छन्। फ्लोरोसेंट ट्युबबाट केहि बिभिन्न रंगहरू, नेतृत्व स्ट्रिपहरू र बत्ती होल्डरहरू।
लाइटिंगले यस्तो कडा बान्की पछ्याउँदैन, किनकि यो स्वादको कुरा हो। आवश्यक छ कि प्रकाश को निर्धारण गर्न एक ढाँचा छ कि यो प्रयोग गर्न को लागी दर्शाउँछ प्रति लिटर पानीमा 30० लुमेनहरू।
प्रकाशमा अर्को महत्त्वपूर्ण कारक रंग र गहनता हो। यदि हामीसँग प्राकृतिक जलीय बिरुवाहरू छन् भने हामीलाई प्रकाश चाहिन्छ जसले हामीलाई प्राकृतिक प्रकाश दिन्छ। उच्च तीव्रता सूर्यको किरणसँग मिल्दैन, त्यसैले ती व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदैन। प्रकाशको तीव्रता जति धेरै हुन्छ, बोटहरू ठूलो हुँदै जान्छ। यसको विपरित, तिनीहरू अग्लो हुन्छन्।
Bedee ऑक्सीजन एक्वेरियम, ...
NICREW क्लासिक एयर पम्प ...
NICREW नानो साइलेन्ट मिनी ...
यि एक्सेसरीमा राखिएका सामानहरू हुन् जसले पानीको वातन बढाउन मद्दत गर्दछन् र यसको साथमा, माछा र बोटबिरुवाहरूको आयु बढाउनुहोस्। माछा र जलीय बोटबिरुवाहरूलाई बाँच्नको लागि पानीमा विघटन गरिएको अक्सिजनको स्तर चाहिन्छ। पानी परिवर्तन, फिल्टरि plants र बोटबिरुवाले पानीलाई अक्सिनेट गर्न सम्भव छ। तर त्यहाँ समयहरू छन् जब यो पर्याप्त छैन र मलाई थाहा छ aerators आवश्यक छ.
यसको अपरेशन सरल छ। तिनीहरू एक्वेरियममा हावालाई यसरी तान्दछन् कि बुलबुले र पानी आवागमन उत्पन्न हुन्छ।
यी उपकरणहरूको नकारात्मक पक्ष भनेको तिनीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न कडा क्यालिब्रेसन चाहिन्छ। हावालाई निकाल्नु पर्छ माछाको गडबडबाट बच्न वा बाँच्ने पानीलाई फोहोर बनाउने।
तिनीहरूले माछा ट्या tank्क एक काफी सजावटी उपस्थिति दिन्छ र आँखा मनपर्दो वातावरण बनाउन, अधिक सुन्दरता संग वातावरण सिर्जना।
पानी सूचक स्तर परीक्षण
डिजिटल पीएच मिटर…
धेरै अवसरहरूमा माछा मर्छन् र यो किन थाहा छैन। यदि तपाईंसँग सबै माथि उल्लिखित सामानहरू छन् भने पनि तपाईंले पानीको अवस्था थाहा पाउनुपर्दछ। यसको लागि त्यहाँ पानी परीक्षण छ।
पानी प्यारामिटरहरू जस्तै pH मान (pH), कुल कठोरता (GH), कार्बोनेट कठोरता (KH), अमोनियम / अमोनिया (NH4 / NH3), नाइट्राइट (NO2), नाइट्रेट (NO3), फास्फेट (PO4) र फलाम (Fe) ।
यी मिटरहरूको साथ हामी पानीको अवस्था थाहा पाउन सक्दछौं र पर्याप्त छ कि छैन भनेर।
म आशा गर्दछु कि यी सामानहरूका साथ तपाईसँग एक्वैरियम उत्तम अवस्थामा हुनेछ।
द्वारा नतालिया सेरेजो बनाउँछ9महिना .
एक एक्वैरियम पानी स्पष्टीकरण पानी सफा राख्न को लागी एक महान मद्दत हो र त्यो भावना बिना ...
एक्वैरियम परीक्षण मात्र सिफारिश गरिएको छैन, तर पानी को गुणस्तर कायम राख्न अनिवार्य मानीन्छ।
द्वारा नतालिया सेरेजो बनाउँछ 10 महिना .
एक्वैरियम को लागी CO2 टुक्रा टुक्रा को एक धेरै संग एक विषय हो र केवल सबैभन्दा मांग aquarists को लागी सिफारिश गरीएको छ, जब देखि ...
त्यहाँ सजावट को टन हो कि सजावट को लागी एक एक्वैरियम को लागी उत्कृष्ट विचार हो, चट्टानहरु वा लाठीहरु बाट क्लासिक आंकडाहरु सम्म छन्।
ब्याकप्याक फिल्टर एक एक्वैरियम, ठूलो वा सानो को लागी एक राम्रो विकल्प हो, र यो फरक पर्दैन यदि ...
AquaClear फिल्टर केहि समय को लागी एक्वैरियम संसार मा भएको जो कोही जस्तै आवाज हुनेछ, किनकि उनीहरु एक हुन् ...
पूरा एक्वैरियम किट संग शुरू गर्न को लागी आदर्श हो, त्यो हो, माछा को दुनिया को प्रशंसकहरु को लागी र ...
हामी पहिले नै धेरै अवसरहरु मा भन्यौं कि सबैभन्दा गाह्रो, साथ साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण, समय मा ...
एक पानी कंडीशनर केहि धेरै आवश्यक छ कि पानी शुद्ध गर्न को लागी नल बाट सीधै आउँछ र यसलाई मा बदल्नुहोस्।
द्वारा नतालिया सेरेजो बनाउँछ 11 महिना .
एक एक्वैरियम siphoner हाम्रो एक्वैरियम को रखरखाव गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी आधारभूत उपकरणहरु मध्ये एक हो र ...
एक एक्वैरियम थर्मामीटर एक आधारभूत उपकरण हो कि एक्वैरियम को तापमान लाई नियन्त्रण मा पुरा तरिकाले राख्न मा मद्दत गर्दछ। क) हो…